April 2021 - Online Hartha
April 30, 2021 by Online Hartha
ခမျြးသာကွှယျဝမညျ့ လကျမပိုငျရှငျမြား အကွောငျး လူတဈယောကျရဲ့ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေနေ အဲ့ဒီလူဘယျလိုလူစားမြိုးလဲဆိုတာပွောပွပေးနိုငျတဲ့အခကျြတှရှေိနပေါတယျ ဒီတဈခါတော့လကျမကိုကွညျ့ပွီးအဲ့ဒီလူဘယျလိုစိတျနစေိတျထား၊ကိုယျရညျကိုယျသှေးရှိမယျဆိုတာပွောပွပေးနိုငျတဲ့အကွောငျးလေးဖတျကွညျ့လိုကျပါဦး။ဖွောငျ့တနျးနတေဲ့လကျမလကျမထောငျလိုကျတဲ့အခါမှာ ဖွောငျ့တနျးနပွေီးနောကျကိုကှေးညှတျနခွေငျးမရှိတဲ့လကျမပိုငျရှငျဖွဈမယျဆိုရငျ သငျဟာအရာရာကိုအရမျးအလေးအနကျထားတတျတဲ့သူတဈဦးဖွဈပါတယျ။စိတျဓာတျမာကွောပွီးခံစားလှယျတဲ့သူတဈဦးမဟုတျပါဘူး။ သငျ့ရဲ့စိတျလှုပျရှားမှုကိုပွလမေ့ရှိတဲ့သူ တဈဦးဖွဈပမေဲ့စိတျဓာတျကတြတျသူတဈဦးတော့မဟုတျပါဘူး။ ကှေးနတေဲ့လကျမလကျမထောငျလိုကျတဲ့ အခါနညျးနညျးဖွဈစေ၊မြားမြားဖွဈစကှေေးနတေတျတဲ့သူတှဟော ကိုယျ့ရဲ့ခံစားခကျြတှကေိုအမြားသိအောငျ ပွတတျတဲ့သူတှဖွေဈသလိုအတှေးတှကေိုလညျးထုတျဖျောပွောရမှာနှဈသကျတတျသူတှဖွေဈပါတယျ လကျမ ရဲပထမအဆဈကဒုတိယအဆဈထကျပိုရှညျမယျဆိုရငျ(လကျမထောငျလိုကျရငျအပျေါအဆဈကိုပထမအဆဈ အဖွဈသတျမှတျပါတယျ စိတျစှမျးအားကိုယုံကွညျသူတဈဦးဖွဈပွီးအလုပျကိုအရမျးကွိုးစားတတျသူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။ အလိုလိုသိစိတျကို ယုံကွညျပွီး အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခလြရှေိ့ပါတယျ။ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလာရငျလညျးတျောတေျာ့ကိုသစ်စာကွီးသူတဈယောကျပါ လကျမရဲ့ပထမအဆဈကဒုတိအဆဈထကျပိုတိုနမေယျဆိုရငျသငျ့ရဲ့ဆုံးဖွတျခကျြအားလုံးကိုစိတျခံစားခကျြထကျလကျတှကေ့မြှုပျေါမှာပဲ မူတညျပွီးခတြတျပါတယျ။ စိတျခံစားခကျြနဲ့လကျတှကေ့တြာကိုယှဉျလာရငျလကျတှကေို့ပိုဦးစားပေးတတျတာကွောငျ့အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလာရငျ သငျ့လြျောတဲ့လကျတှဲဖျောနဲ့တှနေို့ငျဖို့အခှငျ့အရေးကောငျးတှနေဲ့လှဲသှာတတျပါတယျ။ဒီပွဿနာကိုကြျောလှားနိုငျဖို့အတှကျ သငျ့အနနေဲ့အခဈြကိုရှာဖှတေဲ့အခါမှာလကျတှေ့ ကတြာတှကေိုနောကျမှာထားပွီးခံစားခကျြလေးကိုအနညျးငယျထညျ့သှငျးစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ မူရငျးအား ခရကျဒဈ Zawgyi ချမ်းသာကြွယ်ဝမည့် လက်မပိုင်ရှင်များ အကြောင်း လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကနေ အဲ့ဒီလူဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာပြောပြပေးနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့လက်မကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီလူဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထား၊ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိမယ်ဆိုတာပြောပြပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးဖြောင့်တန်းနေတဲ့လက်မလက်မထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြောင့်တန်းနေပြီးနောက်ကိုကွေးညွတ်နေခြင်းမရှိတဲ့လက်မပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာအရာရာကိုအရမ်းအလေးအနက်ထားတတ်တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်မာကြောပြီးခံစားလွယ်တဲ့သူတစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြလေ့မရှိတဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကျတတ်သူတစ်ဦးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကွေးနေတဲ့လက်မလက်မထောင်လိုက်တဲ့ အခါနည်းနည်းဖြစ်စေ၊များများဖြစ်စေကွေးနေတတ်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအများသိအောင် ပြတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်သလိုအတွေးတွေကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြောရမှာနှစ်သက်တတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ လက်မ ရဲပထမအဆစ်ကဒုတိယအဆစ်ထက်ပိုရှည်မယ်ဆိုရင်(လက်မထောင်လိုက်ရင်အပေါ်အဆစ်ကိုပထမအဆစ် အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ် စိတ်စွမ်းအားကိုယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုအရမ်းကြိုးစားတတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အလိုလိုသိစိတ်ကို … Read more
သငျ့ကိုအပြျောကွံတာမဟုတျပဲ လကျထပျဖို့ထိရညျရှယျထားတဲ့ ခဈြသူမှနျးသိသာစတေဲ့ အခကျြမြား
အခဈြရေးတဈခုမှာ အကွောကျရဆုံး ကတော့ ကိုယျက စိတျရငျး အမှနျနဲ့ ပုံအပျပွီးခဈြရသလောကျ ကိုယျ့ကိုအပြျောတှဲ ခံရတာ ပါပဲ။ ဒါဟာ လူတျောတျောမြားမြားလညျး ကွုံရလရှေိ့တဲ့ ပွဿနာ တဈခုဖွဈသလို ခံစားရ တာလညျး အရမျးကို ဆိုးရှားပါတယျ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ကိုယျ့ကို အပြျောတှဲ တာလား၊ အတညျတှဲ တာလားဆိုတာ ခှဲခွားသိမွငျတတျဖို့ လိုပါတယျ အခုဖျောပွပေးမယျ့ အခကျြလေးတှေ ကတော့ သငျ့ကို အတညျတှဲနတေဲ့ ယောကျြားတဈယောကျရဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈ ပါတယျ။ သငျ့ခဈြသူနဲ့ ကိုကျညီေ နရငျတော့ သငျဟာ ကံကောငျးတဲ့သူ တဈယောကျ ပါပဲနျော ။ (၁) သငျ့အနားမှာနရေငျ ရယျမောပြျောရှငျနမေယျ သငျ့ကို အတညျတှဲတဲ့ ယောကျြား တဈယောကျဟာ သငျ့အနားမှာနတေဲ့ အခြိနျတှမှော ရယျမောပြျောရှငျနေ တတျတဲ့ … Read more
မှဲ့ခြောက်နဲ့ တင်းတိပ်ကို တစ်ပတ်အတွင်း သိသာစွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ ဆေးနည်ကောင်း ဖရဲသီး အောက်ခံအဖြူအသားကို ဓား(သို) ဇွန်းဖြင့် ပါးပါးလှီးပြီး မျက်နှာပေါ် မှာရှိတဲ့ မဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ် ရှိတဲ့ နေရာပေါ်မှာ တင်ပေးပါ။ ဒီနည်းကို မ လုပ်ခင် မျက်နှာကို သန့်စင်အောင် အရင်သန့်ရှင်းရေး လုပ်လိုက် ရပါမယ်။ မျက်နှာ သန့်စင်ပြီးတာနဲ့ ဖရဲသီး အောက်ခံ အဖြူသာကို ပါးပါးလှီးပြီး မျက်နှာပေါ်တင်ပေးပြီး နာရီ တော်တော်ကြာ အောင် တင်ထားပေးရပါမယ် အိပ်ယာဝင်မယ့် အချိန်မှာလည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ မဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ် ရှိနေသူတွေ အတွက် အဆင်ပြေ မယ့် နည်းလမ်း ကောင်းလေးပါ။ ဖရဲသီးမှာပါတဲ့ ရေဓာတ်က မဲ့ခြောက်၊ တင်းတိပ်တို့ကို … Read more
ဘာကြောင့်သင့်ဖူးစာရှင်နဲ့ မဆုံရသေးတာလဲဆိုတာ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးကို ရွေးချယ်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ပါ
ဘာကြောင့်သင့်ဖူးစာရှင်နဲ့ မဆုံရသေးတာလဲဆိုတာ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးကို ရွေးချယ်ပြီး အဖြေရှာကြည့်ပါ (၁) ရက်ပန်ဇယ် သင်ဟာ အရမ်းကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ အချစ်ရေးကိုလည်း အများကြီးမျှော်လင့်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ သင့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်ကိုလည်း စံသတ်မှတ်ချက်တွေ အများကြီးထားပြီး အချစ်ရေးမှာလည်း အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိလောက်အောင် လူတိုင်းအားကျပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာကတော့ သင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့လူရှားပါးတဲ့အတွက် ထိုလူကို စောင့်ဆိုင်းရင်း အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီး ဖြစ်နေရတာပါ။ (၂) အေရီယယ် သင်ဟာ အလုပ်အရမ်းများတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါ့အပြင် ရည်မှန်းချက်ကြီးများပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို မရောက်ရောက်အောင် ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီလိုရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့ သင့်ရဲ့စိတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ အချိန်တွေ နဲ့ ငွေတွေကို ပုံအပ်ပြီး ကြိုးစားနေရတဲ့အတွက် အချစ်ရေးကိုအာရုံမရောက်နိုင်သေးတာပါ။ (၃) ဂျက်စမင် သင်ဟာ အတိတ်နွံထဲကနေ ရုန်းမထွက်သေးနိုင်လို့ပါ။ ပြောချင်တာက … Read more
ရွာတရွာဖြစ်ပေါ်ဖို့ စုန်း ( ၇ ) ယောက် ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာ…
ရွာတရွာ ဖြစ်ပေါ်ဖို့ စုန်း ( ၇ ) ယောက် ရှိဖို့လိုတယ်လို့ တလွဲအတွေးတွေနဲ့ ကြားဖူးနားဝ ရှိခဲ့တာကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ပါရစေ… ” ယောဒေသမှာ ရွာသစ်တစ်ရွာတည်ဖို့ စုန်း( ၇ )ယောက်လိုတယ် ” တဲ့လား ငယ်စဉ်က ကြားဖူးနားဝ စကားလေးပါ။ စုန်းအကြောင်းတွေက အိပ်ယာဝင်ပုံပြင်တွေလို အထူးထူး အခြားခြား အများများအပြားပြား။ တကယ်တွေ့ဖူးသည်ဆိုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ထံ မေးမြန်းပြန်တော့လည်း စေ့စေ့ငင ဖြေနိုင်သူဟူ၍ မတွေ့ရသေးပါ။ မိမိလက်လှမ်းမီသလောက်ရှာဖွေကြည်တော့ရွာတစ်ရွာတည်ဖို့လိုအပ်တဲ့ စုန်း (၇) ယောက်က… စုန်း=> စုန္နော=>ဖြောင့်မှန်သောသူ ( စုန္နောတိ ဥဇုကတော-ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သည့် ပညာရှင်ခုနှစ်ဦး ) ဋီကာကျမ်း ထို ခုနှစ်ဦးမှာ ( ၁ )မြေပညာရှင် ရွာသစ်တည်မည့်နေရာသည် မြေအနေအထားသင့်မသင့် မြေဆီမြေလွှာကို … Read more
ရာသီခွင်အလိုက် ဒီနှစ်ထဲမှာ တွေ့ကြုံရမယ့် ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲများ ဘာလိုလိုနဲ့ နှစ်သစ်စလာတာ ခုဆိုရင် နှစ်တစ်ဝက်တောင် ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရပြီလဲ ထပ်ပြီးတော့ရော ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဒီနှစ်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲခြင်းတွေ ကြုံရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ကိုယ့်ရာသီခွင်အရ ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့ရှိလဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်။ Aries (March 21 – April 19) Aries တွေကတော့ ဒီနှစ်မှာ စွန့်စားမှုတွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်နော်။ သင်အရမ်းကို လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေ၊ ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ သွားချင်တဲ့ ခရီးတွေ သင်လိုချင်တာ ဘာမဆိုလုပ်ဖို့ အကောင်းဆုံး နှစ်တစ်နှစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်က သင့်အတွက် အားအင်တွေနဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်မခံသင့်ပါဘူး။ Taurus (April … Read more
တစ်နေ့ကို မိနစ်(၂၀)လောက် ခြေထောက်လုပ်ရုံနဲ့ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတော်တော်များများကတော့ ကာယခွန်အားအများကြီးစိုက်ထုတ်ရပြီး ချွေးထွက်မောပန်းရတာမျိုးတွေ များပါတယ် ။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကြားထဲမှာမှ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးကျေးဇူး များစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် ။ ဒါကတော့ ခြေထောက်မြှောက်လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ ခြေထောက်မြှောက်လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ မိနစ် (၂၀)နဲ့ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရင်ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ (၁) ခြေထောက်ဖောတာ ၊ ရောင်တာ သက်သာမယ် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ခြေထောက်သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အထူးကောင်းမွန်စေလို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အဝလွန်တာနဲ့ ၊ မှားယွင်းတဲ့ စားသောက်ပုံတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်ဖောတာ ၊ ရောင်တာတွေကို လျော့ကျစေပြီ ခြေထောက် သွယ်လာစေပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်စီးရင်ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုဒါဏ်တွေကိုလည်းသက်သာလာစေပါတယ် (၂) အစာခြေစနစ် ကောင်းမွန်လာမယ် ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါတွေရဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုပါ ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် အစာခြေစနစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။ အစာစုပြီး ဗိုက်ပူတာ၊ … Read more
သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့ ဂဏန်းဗေဒင် သင်ရောဘယ်နေ့မွေးသလဲ ? မွေးနေ့..မွေးရက်များနဲ့ သူရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများ. တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၁) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 2nd, 11th, 20th, 29th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၂) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 3rd, 12th, 21st, 30th မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၃) သမား… တကယ်လို့..မင်းဟာ..လတွေရဲ့. 4th, 13th, 22nd, 31st မှာ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင်.. == မင်းဟာ.. နံပါတ် (၄) … Read more
ဒီခေတ်လူငယ်တွေ ဘာမှန်းမသိတဲ့ “ ဈေး အစ” “ ဇာတ် အလယ် ” “ ဖာ အဆုံး ”
ဒီခေတ်လူငယ်တွေ ဘာမှန်းမသိတဲ့ “ ဈေး အစ” “ ဇာတ် အလယ် ” “ ဖာ အဆုံး ” ဒီစကားလေးက မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရင်ကို တခုခု ဖြစ်ပေါ် စေလိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါသည် ။ ။ ဖာ ဆိုသော စကားက အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခွထွက်နေသော စကားဖြစ်ပါသည် ။ ။ မိတ်ဆွေတို့ ရင်ထဲတွင် ဖာဆိုသော စကားကြားသည်နှင့် ယုတ်ညံ့သော စကားဟု ထင်ကောင်း ထင်ပါလိမ့်မည် ။ ။ ထို အတွေးနှင့် အတူ စကားတစ်ခု ကိုလည်း ရိုင်းပြသည်ဟု ထင်ပါလိမ့်မည် ။ ။ ” ဈေးအစ ဇာတ်အလယ် ဖာအဆုံး ” ဆိုတဲ့ ရှေးလူကြီး … Read more
ခွထေောကျလေးကို ဖှေးဥပွီး သနျ့ပွနျ့သှားစမေယျ့ အိမျတှငျးခြေးခြှတျနညျး (၅)မြိုး
ခွထေောကျတှေ မဲညဈညဈဖွဈနလေို့ ဘာဖိနပျစီးစီး ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုလြော့နညျးနပေါသလား။ ဒါဆိုရငျတော့ စိတျမပူပါနဲ့နျော။ ငှကေုနျကွေးကလြညျး သကျသာ၊ လှယျလညျးလှယျကူပွီး ထိရောကျတဲ့ ခွထေောကျခြေးခြှတျနညျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။ ပြိုမတေို့ အားလုံးပဲ ဖှေးဥပွီး သနျ့ပွနျ့တဲ့ ခွထေောကျလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစလေို့။ (၁) ဆား ဆား လကျဖကျရညျဇှနျး ၃ ဇှနျး ပငျလယျဆား လကျဖကျရညျဇှနျး ၃ ဇှနျး ရခြေိုးဆပျပွာရညျ ဖနျခှကျတဈဝကျ ကွိုကျနှဈသကျရာ ရနံ့ဆီ ၅ စကျ ပါဝငျပစ်စညျးအားလုံးကို သသေခြောခြာ ရောမှလေိုကျပါ။ ဇလုံထဲကို ရနှေေးထညျ့ပွီး ခွထေောကျကို ၅မိနဈခနျ့ စိမျပွီး ရလာတဲ့ အနှဈလေးနဲ့ ညငျညငျသာသာ ပှတျပွီး နှိပျနယျပေးပါ။ ၁၅ မိနဈခနျ့ ပှတျပေးပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ သနျ့စငျတဲ့ ရနှေေးလေးနဲ့ ဆေးကွောကာ Cream … Read more